शिक्षा / स्वास्थ्य - छात्रा मात्र पढ्ने ७७ वर्ष पुरानो विद्यालय - page 2
७१. अंग्रेजी वक्ताहरुद्धारा कामको समयको बारेमा कुरा गर्न क्रिया र कालहरु प्रयोग गरिन्छ । तपाईंको आफ्नै भाषामा त्यही खालको अभिव्यक्ति नहुन पनि सक्छ । तपाईंलाई यि कालहरु र तिनको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने बारेमा थाहाहुन जरुरी छ । ७२. अंगे्रजीमा धेरै नै अनियमित क्रियाहरु छन् । तपाईं तिनीहरुको बारेमा गहिरोमा जानुपर्छ । ७३. जारि राख्नुहोस् । यदी तपाईंले अंग्रेजी बोल्ने कुरालाई बीचमा रोक्नुभयो वा निरन्तरता दिनुभएन भने तपाईंलाई थाहाहुन्छ कि तपाईंको स्तर घट्छ र तपाईंको मिहेनत खेर जान्छ । ७४. परिक्षामा आएको खराब अंकबाट हतोत्साहित नहुनुहोस् ।	थप पढ्नुहोस्
६१. अमेरिकी र बेलायती अंग्रेजीको फरक बारे सचेत चाहीँ हुनुहोस् र आफुले प्रयोग गर्ने शब्द सोही अनुसार प्रयोग गर्नुहोस । For example: Elevator (US) / Lift (British). ६२. आफुसँगै क्युकार्ड (क्युकार्ड भनेको सानो कागजको टुक्राहरु हो जहाँ तपाईंले नयाँ शब्दहरु लेख्न सक्नुहुन्छ) बोक्नुहोस् । तपाईंले यि कार्डहरुलाई आफु फुर्सद भएको समयमा तानेर हेर्न सक्नुहुनेछ । ६३. यि क्युकार्डहरुलाई आफ्नो घर कोठामा टाँस्नुहोस् । जसलाई तपाईंले केही चिजहरुको मात्रा छुट्याउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । आफ्नो पाल्तु कुकुर वा खेलौनामा पनि टाँस्नुहोस् । ६४. तपाईंले वाक्यांश क्रियालाई वेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न ।	थप पढ्नुहोस्
जनचेतना बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने बढे
मुग्लिन । चितवनको एक मात्र गाउँपालिका ईच्छाकामनामा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समयमा जनचेतना बढ्दै गएपछि यहाँ हरेक वर्ष स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुदैँ गएको हो । गाउँपालिकाभित्र रहेका पाँचवटा स्वास्थ्यचौकीमा गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १३२ जनाले सुत्केरी गराएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख धनकुमार खड्काले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा ५१६ जनाले पहिलो गर्भ जाँच गराएका थिए । भने नियमित चार पटक १४० जनाले गर्भ जाँच गराएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
के तपाईलाई थाहा छ ? रुघाखोकीको भाइरसले मूत्रथैलीको क्यान्सर निको पार्न सक्छ !
काठमाडौं । के तपाईलाई थाहा छ ? रुघाखोकीका लागि जिम्मेवार एक प्रकारको भाइरसले मूत्रथैलीमा रहेका क्यान्सरका कोषहरूलाई मार्न मद्दत गर्न सक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। सानो स्तरमा गरिएको उक्त अध्ययनका क्रममा एकजना बिरामीमा क्यान्सरको सङ्केत पूर्ण रूपमा निर्मूल भएको र अन्य १४ जनामा क्यान्सर सम्बन्धी कोषहरू मरेको प्रमाण फेला परेको हो। ब्रिटेनस्थित युनिभर्सिटी अफ सरीका अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त भाइरसले क्यान्सरको उपचारमा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्ने र क्यान्सरको सङ्क्रमण दोहोरिने सम्भावना घटाउने विश्वास लिएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, चाबहिल बीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका अश्रितहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा छुट दिने सम्बन्धि संझौता सम्पन्न भएको छ । संझौता पत्रमा हस्पिटलका प्रबन्ध संचालक बाबुकाजी कार्की र जनता बैंक चाबहिल शाखाका शाखा प्रबन्धक सुरेश गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । संझौता अनुसार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका आश्रितहरुले उक्त अस्पतालको सेवा लिएवापत बिशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
अंग्रेजी सुधार गर्ने अनौठो १०० वटा तरिकाहरु – भाग ६
५१. हिम्मत नहार्नुस्, सकारात्मक सोच राख्नुहोस् । कहिलेकाहीँ तपाईंलाई लाग्न सक्छ तपईंले सिक्ने कुरामा सोचेजती छिटो प्रगती गरिराख्नुभएको छैन । यस्तो सबैलाई लाग्न सक्छ । तर पछि तपाईंले सिक्नुहुनेछ । ५२. सिकाइलाई रमाइलो बनाउनुहोस् । रमाईलो सँग सिक्दा हामीले धेरै सिक्न सक्छौं । ५३. तपाईले बोल्दै गर्दा यदी डर लाग्यो भने बोल्नु अघी दुई-तीनपटक लामो र गहिरो श्वास लिनुहोस् । तपाईंले सजिलो अुनभव गरेपछि राम्रोसँग बोल्नुहुने छ । ५४. तपाईंले विगतमा प्रयोग गरेको सीडी र पुस्तकहरुलाई हेरेर आफुलाई उत्प्रेरित बनाइराख्नुहो ।	थप पढ्नुहोस्
४१. अंग्रेजीमा पत्र मित्रता अथवा इन्टरनेटमा च्याट रुम, मन्च, सामाजिक संजाल प्रयोग गर्नुहोस् । यदी तपाईं कसैसँग अंग्रेजीमा बोल्न सक्नुहुन्न भने पत्र मित्रता अथवा इन्टरनेटमा च्याट रुम, मन्च, सामाजिक संजाल अर्को उत्कृष्ट तरिका हो । ४२. अंग्रेजी सीडी प्रयोग गर्नुहोस् । केही वाक्यहरुलाई सुन्नुहोस् र सुनेका वाक्यहरुलाई दोहोर्याउनुहोस् । लय र स्वरको आरोह अवरोहलाई ध्यान दिनुहोस् । ४३. रेडियोमा अंग्रेजी कार्यक्रम, समाचार सुन्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईंले ध्यान दिएर सक्रियतापुर्वक जानिजानी नसुनेपनि तपाईंको कानलाई अंग्रेजी सुन्ने तालिम प्राप्त हुन्छ वा बानी लाग्छ ।	थप पढ्नुहोस्
मिर्गौला पिडितलाई नेविसंघकोआर्थिक सहयोग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ) ले एक मिर्गौलाका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६ औं जन्मजयन्तिको अवसर पारी नेविसंघले जोरपाटीस्थित मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका ३२ वर्षीय पुष्प खत्रीलाई ५१ हजार सहयोग गरेको हो । पुष्पका दुबै मिर्गौला फेल भएका छन् । नेबिसंघ धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस इकाइ सभापति करुणा कटवालको समन्वयमा संकलित रकम नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले हस्तान्तरण गरेका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा चरम बेथिती
काठमाडौ । इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहेको पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस समस्याग्रस्त बनेको छ । पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र आर्थिक अभावले क्याम्पस समस्यामा परेको प्रशासनले जनाएको छ । क्याम्पसमा कार्यरत जनशक्ति उमेर हदबन्दीका कारण अवकाश लिइरहेको तर तुरुन्त नयाँ नियुक्ति गर्न नसकिएको सहायक क्याम्पस प्रमुख शिवकृष्ण दुवाले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमा नै पदपूर्ति नगर्दा क्याम्पसमा सधैँ जनशक्ति अभाव भोग्नु परिरहेको उनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको पूरक (ग्रेड वृद्धि) परीक्षा आगामी साउन २६ र २७ गते सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले आज परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्दै ग्रेड वृद्धि परीक्षाका लागि आगामी साउन १५ गतेभित्र प्रवेशपत्र र ग्रेडसीटको प्रतिलिपी राखी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा फाराम बुझाउन विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्